गणतन्त्रमा पनि सामन्तवाद::Nepalese News Portal
गणतन्त्रमा पनि सामन्तवाद
न त राजाको कुनै परिश्रम थियो न त उनका सहयोगीको । राजाको आदेश भयो, जग्गाधनी भए, तिनै राजाका सहयोगी । तर उक्त जमिन यहीँका किसानहरूले भिरपाखा, पोखरी, जङ्गल, चउर, खोल्सी, वगरजस्ता जमिनलाई खनिखोस्री उव्जाउयुक्त बनाएका हुन् र अहिलेसम्म पनि संरक्षण गरी आएका छन् । त्यतीबेला जस–जसले बिर्ता पाए, तिनले कहिल्यै जमिनमा टेकेनन् । सम्भवत: उनीहरूलाई आफ्नो जमिन कहाँ पर्छ भन्ने न त्यतीबेला थाहा थियो, न अहिले उनीहरूका सन्तानहरूलाई थाहा छ । जमिनमा कसरी उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने समेत ज्ञान सिप नभएका ठालूहरू जमिनको मालिक (बिर्तावाला) रुपमा गनिए ।
धेरैपछिसम्म जमिनको आयस्था गाउँका ठुलाबडा, मुखिया, द्धारेहरू र बिर्तावालाले किसानहरूबाट सङ्कलन गरी अघाउन्जेल खाए । बुढापाकाहरू भन्छन्, पछिसम्म पनि कुतको रुपमा विभिन्न सामग्री बोकेर बिर्तावालाहरूलाई काठमाडौँसम्म पुर्याउन जानु पथ्र्याे । न यातायात थियो, न कुनै विकल्प । बिर्तावाहरू काठमाडौं बस्थे । खुट्टाले हिडेर भारी बोकी बोकी हप्तौं लगाएर काठमाडौं जानुपर्दा ठूलै कष्ट हुन्थ्यो । किसानहरूले कुतको रुपमा दही, घ्यू, केरा, चामल, खसी, बोका, पैसा र मीठामीठा तरकारीहरू बुझाउनु पथ्र्याे । अचम्म त के भने जुन सामग्री पहिले उत्पादन हुन्छ, त्यही मालिकलाई बुझाउनुपर्ने । नबुझाए, कार्वाही । यस्तो प्रथा विक्रम् सम्व्त २०५० साल सम्म गाउँघरमा चलेको थियो । पछि किसानहरूले महशुस गरे, हामीहरू बिर्तावालाबाट ठगिएको छौं, त्यसपछि कुत तिर्न छाडिएको कालिका गाउँपालिका वडा नं. ३, रसुवाका भवानीप्रसाद न्यौपाने बताउछन् ।
“बिर्ता समस्यालाई गणन्तत्रको कलङ्कै रुप दिन्छन्, किसानहरू । किनभने सामन्ती राज्य व्यवस्थाले सुरु गरेको यस्तो कुप्रथा गणतन्त्रमा समेत निरन्तरता पाउनु ज्यादै दुःख लाग्दो विषय हो । यस विषयमा किसानहरूले आवाज उठाइरहेका छन्, तर राज्यले किसानको समस्या सुनेकौ छैन ।
कतिपय किसानहरूसँग कानुनबमोजिम आधिकारीकरूपमा बिर्ता जग्गा खुल्ने निस्सा तथा बिर्तावाललाई कुत बुझाएको भर्पाईलगायत कागजात प्रमाणका रूपमा छन् । कतिपयसँग जग्गा जमिन जोतभोग गरिराखेको छ, तर प्रमाणहरू कता पुगे केहि अत्तोपत्तो छैन । जग्गाको कागजी महत्व हुन थालेको भनेको २०३५/३६ सालमा नापी भएयता मात्र भएको उत्तरगया गाउँपालिका वडा नं. ४ का जानुका घले बताउछिन् ।
किसानले पुस्तौँदेखि जोतभोग गर्दै आएको केही जग्गा ऐनले नै समाप्त गरिसकेका बिर्र्तावालहरूले गैरकानुनीरूपमा आफ्नो नाममा दर्ता गराएकाले बिर्ता जग्गाको समस्या फेरी कतिपय किसानसँग बाँकी नै रहेको छ । सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रको एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार नुवाकोटमा १ हजार ५ सय ५८ परिवारले जोतभोग गरेका करिब ४ हजार ९ सय ५७ रोपनी र रसुवामा ७ सय १८ परिवारले जोतभोग गरेका करिव १ हजार ४ सय ६९ रोपनी जमिन बिर्ता छ । आफूले जोतभोग, माया र संरक्षण गरेको जमिनको स्वामित्वको लागि किसानहरू लडाई लडिरहेका छन्, अझै पनि सरकारले किसानको पक्षमा उचित निर्णय गरेको छैन ।
फेरी पनि राज्य शक्तिको वरिपरि तिनै हिजोका सामन्तहरूको हालिमुहाली छ । हिजो राजनीतिक तवरबाट जुन अपेक्षाहरू बाडिएको थियो, जुन आश्वासनहरू जनतासामू दिइएको थियो, सोअनुसार नभएको प्रति किसानहरू चिन्तित छन् । जनतासँग गरिएको बाँचा पूरा गर्ने हो भने समाधानको विकल्पको रुपमा हाल जसजसले यस्ता प्रकृतिको जग्गाहरू जोतभोग गरिररहेका छन्, तिनै किसानको नाममा सर्जमिन र वडाको सिफारिसमा जग्गा दर्ता गरी जग्गाधनी पुर्जा उपलव्ध गराउने नीति अख्तियार गर्न आवश्यक छ । यस्तो प्रकृतिको जग्गा किसानले बिना सर्त पाउने वातावरण राज्यले गरेमा किसानप्रति न्याय हुन्छ ।
यतिबेला भूमिसम्बन्धि विभिन्न ऐन, कानुन तथा नीतिहरू तर्जुमा भइरहेका छन्, मस्यौदाहरू तयार भएका छन्, यसैमा छलफल र बहस पनि भइरहेका छन् । यो बेला किसानको पक्षमा कानुनहरू बनेका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा जनप्रतिनिधिहरूको विशेष चासो राख्नु पर्छ । किनकी हिजा चुनावको बेलामा चाहे जमिनमुनीबाट होस, या अकाशमाथिबाट, जताबाट सकिन्छ हामी समस्या समाधान गर्छाै भनेका छन् । उनीहरू नै नेतृत्वहरू तहमा छन् । जनताको समस्या हल गर्ने कसम खाने जनप्रतिनिधिहरूले अहिले ऐन, कानुनहरू बन्दै गरेको समयमा यस्तो समस्या जरैदेखि हल गर्नेगरी समाधान खोज्नु जरुरी छ । किसानहरूलाई गणतन्त्र आएको महशुस गराउन उनीहरूको हरेक समस्या हल गराउन सहजीकरण गर्ने बेला यही हो । चाहे संसद्मा होस् वा मन्त्रिपरिषद्मा, प्रदेशमा होस् या स्थानीय तहमा । अहिले सबैतिर जनताका प्रतिनिधिहरू आशिन छन्, कानुन बनाउने र पास गर्ने अधिकारी पनि जनप्रतिनिधिहरूमा निहित छ । यो बेला किसानहरूको पक्षमा सोच्नु जरुरी छ । र किसानहरूले पनि सक्रियरुपमा आफ्ना जनप्रतिनिधिहरू बारम्बार सोध्नु जरुरी छ की हाम्रो समस्या कहिले र कसरी समाधान हुन्छ ?